Video Ingxoxo # 1 - IngxoxoRut
Ikhamera kufuneka inikwe amandla! Olu lungiso luya kuhlala lunikwe amandla kude kubekho ubuso bakho bubonakala ngokucacileyo kwisakhelo. Ukuba le meko iphulwa, umsebenzi uyakhubazeka ngokuzenzekelayo.
Xelela abahlobo bakho ngeengxoxo zakho zokuxoxa ngevidiyo okwangoku ngoku!
Ingxoxo ye Roulette - ukukhulumisana okusemgangathweni kunye nokulula nanini na imini okanye ubusuku
Njengeenkcubeko zenzululwazi zithi, iingxaki ezinzulu zabantu banamhlanje zingavumelani kunye nezithintelo zangaphakathi ezikhusela ukunxibelelana ngokupheleleyo. Siphila njani? Ikhaya, umsebenzi, ivenkile ngeveki, iTV okanye i-Intanethi kusihlwa, ngamanye amaxesha - iintlanganiso kunye nabalingane. Kunzima kanzima "ukucima" ukuthetha ngokubambisana kwabantu ngendlela yobomi. Ukulondeka kuyisiphumo esiyinhloko sokusondelana kwethu kunye nokulahleka kokuthetha kunye nezakhono zokuva. Kodwa ulonwabo lwethu ngokuthe ngqo luxhomekeke ekubeni namandla kunye noqhelwano lwenxibelelwano-apho ufumana umlingane womphefumlo, umthandi okanye intombazana encokolayo, engathandekiyo? Siya kuba neentloni kwaye sivaliwe, musa ukudibana nesitrato, udlule ngumqeshwa okhangayo kwiSebe elikufutshane, ungalindelanga ukuya kumfokazi ongeyena kwi-cafe. Ngaba kukho indlela yokuphuma kwesi siqalo esinonya? I-intanethi, umonakalo onobuhlungu wexesha lethu, ngokungaqhelekanga, kunokusinceda! Eyona nto idalwe kuyo i-video chat Roulette, eyenzelwe ukusinika into ebaluleke kakhulu ebomini bethu - unxibelelwano.
Video Roulette - ulwandle lwamathuba okunxibelelana kwakho
Yintoni le ngxoxo yevidiyo kwaye inokukunceda njani? Okokuqala, oku kuthetha ukuthetha nabantu abanomdla ngexesha langempela. Ngokukhululekileyo, unokuxoxa naluphi na izihloko nabantu abangaziwayo kwenye indawo ekupheleni kwelizwe, wabelane ngeemvakalelo zakho namava, ufunde ezininzi izinto ezintsha kunye nezinto ezithakazelisayo, ukhulule kwaye ubaleke kwimisebenzi yemihla ngemihla, ekugqibeleni. Ngokuvisisanayo, eli lililo lihle kumntu wonke, kungakhathaliseki ukuba isini, ubudala, imeko yezenhlalakahle. Yintoni enomdla, i-Roulette yevidiyo isoloko iyinto engamangalisiyo: awunakwazi ukuba kusengaphambili ngubani oza kuthethana naye ngoku okanye kwiminithi eyi-10. Inkqubo ngokuzenzekelayo ikhetha udibaniselwano kuwe, usebenzisa indlela yeenombolo ezingahleliwe! Ukwenza oku, kufuneka nje ube nekhamera yevidiyo kunye nemakrofoni ukuxhuma kwiShatroulette. Umgaqo we-roulette kwaye akukho nto! Kodwa nguye onithwala unolwazi olunomdla, olonwabisayo nolonwabisayo olunokutshintsha ubomi bakho.
Yintoni esinokuyenza? Phantse wonke umntu!
Thetha ngeenzuzo zikaShat Ruletka, sithatha imizekelo ethile.
Ukulwa neentloni Abantu abaninzi babhekene nobunzima bokunxibelelana kwangempela: izithintelo zangaphakathi, iingxaki, ukunganeliseki ngokubonakala kwazo kunye nabo ngokwabo bathabatha ukuzimisela ukuthetha nabantu ebomini boqobo. Kodwa unokutshintsha ubomi bakho bube bhetele, fumana abahlobo abatsha kunye nothando lwakho xa unqoba unyulu! I-Roulette ye-Chat 24 yithuba elihle lokuzisebenzisa izakhono zokunxibelelana kwaye ngokukhawuleza uzilahle ezininzi iinkqubo ezinxibelelwano. Kubantu abaninzi banamahloni, into yokuba umxolelane nje kuphela kwi-screen monitor yenza uzive ukhululekile kwaye ukhuseleko lwengqondo. Ngaloo ndlela, nje ngokuthetha nabantu ngezihloko ezahlukahlukeneyo, unokukunceda uhlakulele izakhono zengxoxo ezifanelekileyo, intetho enomdla kunye nokudlala ngothando. Ukwazi, uya kuphumelela!
Ukugcina ukuxakeka ngonaphakade. Kubantu abashishini abahlala kwiinkathazo zengxaki rhoqo, umba wokungabikho kolwazi unxibelelwano. Iintlanganiso zezoShishino, isisombululo sexesha lokusebenza kunye noogxa abaqaliyo-ndifuna ukubonakala kwintsholongwane, izihloko ezingacwangciswanga kunye nezingenakucatshulwa. I-Roulette yeVidiyo 24 yithuba lokuxhuma kwingxoxo nanini na. Inkonzo isebenza malunga newashi, efanelekileyo kakhulu kubantu abaneeyure eziqhelekileyo zokusebenza. Wagqiba intlanganiso ngo-10 ntambama? Vula ingxoxo yevidiyo uze uxoxe namanye amabhokhwe. Ngaba unomzuzu wamahhala ngaphambi kokuhlwa? Xoxa kunye nabasebenzi abaxhamlayo - ngubani, ukuba bengenjalo, "baya kuqonda baze baxolele" umnqweno wokuba ube nexesha kwaye wenze okusemgangathweni kwiiyure ezingama-24 ngosuku?
Ithemba ngeenhliziyo ezizimeleyo Ukuba ufuna umphefumlo wakho umlingane, kodwa ngenxa yesizathu esithile awukwazi ukukufumana ngokwenene, ungadikibali. I-Chatrulet izokukunceda ekufuneni kwakho. Apha unamathuba aphezulu kakhulu ekunxibelelana nentombazana entle okanye intombazana enomdla. Ukuxoxa kwingqungquthela yengxoxo engahleliyo akukwenzi ukuba nantoni na! Hlonipha kwaye ube nobungane, kwaye ngokuqinisekileyo uya kuthandana. Kule meko, akukho nto ikuthintela ukuba uxoxe nabo kwiintlanganiso ezingaxhunyiwe kwi-intanethi, kwaye ngubani owaziyo, mhlawumbi le nto i-destiny yakho?
Hlasela kumzuzwana onzima. Unzima, amaxesha anzima wonke umntu, kwaye wonke umntu uyazi ukuba kunzima kangakanani ukunyamezela kwedwa. Xa kungekho mntu uthetha ngeengxaki zabo, babelane ngeengxaki ezibuhlungu kwaye uthele nje umphefumlo, kuba ngumxakatho. Ngokusoloko kunzima ngathi ukuxelela intsapho kunye nabahlobo ngeengxaki zethu - abanokusiqonda, kwaye ubudlelwane nabo buya kuncipha. Ngamanye amaxesha umntu ongaziwayo kunye namava akhe ngobomi kunye nombono wehlabathi uba ngu-psychologist engcono kakhulu. Ngokuxelela ingxoxo yakho yevidiyo ye-interlocutor 24 exhalabisa kwaye ikucinezele, unokufumana impendulo kumbuzo oyintloko.Ekugqibeleni, ukuthetha nje okanye ngokuphambeneyo, kunceda kakhulu ukuphulaphula umntu.
Kubonakala kunxibelelwano oluhle. Ngaba uthanda ukuthetha, udibana nabantu abatsha, ufunde into entsha kwaye iluncedo kuwe rhoqo, ufumane imida emphefumlweni wakho? Emva koko ingxoxo yevidiyo 24 yinto oyifunayo. Apha unakho nje ukuthetha kakuhle "malunga nantoni", funda into entsha malunga nento enomdla kuwe, fumana enye intsha yolwazi, wandise i-horizons yakho. Awukwazi ukuba ngubani umboniso wevidiyo oza kukuxhuma nawe! Ngaba uyabhiyozela into, kunye nomnxibelelwano wakho? Emva koko uvale iziglasi ngeso esweni - kuya kukuvuyisa ngakumbi! Yilungele ukupheka into enomnandi? Buza umsikazi wakho ngaphesheya kweso saziso malunga nokupheka! Ngaba uloba okanye iimoto? Ukuba unethamsanqa ukuhlangabezana nomthandi ofanayo, ngoko unokufumana umhlobo omkhulu ebomini bakho!
Ikhwalithi yakho kunye noqhagamshelwano olukhuselekileyo lungaphezu kwakho konke!
Video yokuxoxa ngeRoulette iyinkalo engenamkhawulo kwamathuba kuwe! Fumana ihlabathi lezonxibelelwano eziphilayo, wandise i-horizons uze uhlangabezane nezinto ezintsha! Nathi, sinokukhathalela ngomgangatho woqhagamshelwano kwi-webchat yethu. Ividiyo ye-24 yindawo apho kulandelelana ngokungqongqo imigaqo yobungqina kwaye ungavumeli ukuphulwa okuthe ngqo kokuziphatha, ukuziphatha nokuziphatha. Ukuze sikukhusele kwixesha elingathandekiyo, silumkele ngenyameko into eyenzeka kwi-Intanethi, kwaye ngokukhawuleza sijonge izikrini zamagumbi ethu okuxoxa. Fundisisa kwaye ulandele imithetho elula yencoko yethu ye-intanethi, kwaye ujabulele ukukhulumisana okuphakamileyo kunye nolonwabo. I-Roulette yengxoxo - inomdla, inomdla, ilula kwaye ihlala ikunceda kuwe! Sikulindele kuwe naliphi na imini yomini okanye ubusuku boqhagamshelwano oluphezulu kunye nokuvelisa!
Ividiyo ethandwa kakhulu kwi-chats
I-roulette ye-chat eyaziwa kakhulu yi-, eyakhiwe ngoNovemba 2009 ngumntwana wesikolo waseMoscow, u-Andrei Ternovsky, namhlanje unguye igama lekhaya kwaye ibeka ithoni kwiindawo ezininzi ze-intanethi ezijolise ekufuneni okungafunekiyo kwezi-interlocutors.
Kubonakala iinyanga ezimbalwa ngaphambilana nomlingani wayo wamazwe ngamazwe - Omegle (eyadalwa ngo-Matshi 25, 2009), nguye onokulungela ngokufanelekileyo uluhlu lweetrolettes zeengxoxo zehlabathi lonke. Yaye nangona ukuhamba kwamanje kweChatrulett kuhla kweshumi ngokuphindaphindiweyo kunokuba kukho ukuthandwa kwayo (abantu abayi-150 000 kunye no-1.5 yezigidi zabantu ngosuku), oku akukuthinteli ekubeni ube ngumkhokeli phakathi kweenkonzo zokuthandana. U-Andrei Ternovsky usasebenza kunye neqonga, ezama ukwenza i-video yakhe ixoxe ngokulula njengoko kunokwenzeka ukunxibelelana. Phakathi kwezinto ezintsha zentetho ye-chatrulet yindlela yokubhalisa (ngokumema, ngemali, njl.) Kunye nokukwazi ukuvala abasebenzisi.
Umntwana wesikolo saseLeamerika uLeif K-Brooks Omegle.com unikela abasebenzisi bayo inkululeko enkulu yokuthatha isenzo: ngokungafani nendawo yokuxoxa, akukho mfuneko yokukhathazeka ngokubhalisa - unxibelelwano luyacaca ngokupheleleyo. Ngokwakho inxalenye yeskrini, uya kuthiwa "Wena" ("Wena"), kunye nomnxibelelwano wakho (kwaye wena ngomntu) - "Wongqongqo" ("Ulunge"). Unokubanxibelelana okanye ngokudibanisa ingxoxo yevidiyo, okanye ngokubeka ifomathi yombhalo yencoko. Njengazo zonke ii-roulettes eziqhelekileyo zengxoxo, u-Omegle ufumana i-interlocutors kwimodi engahleliweyo, kodwa kwabo bafuna ngandlela-thile ucacise ukukhangela, kukho ithuba lokucacisa umdla wabo. Okungadingeki ukuba uthe, lo mgaqo uvumela u-Omegle ukuba abe yinkokeli ekubalweni kwabaphulaphuli bemihla abangaphezu kwama-220 abantu abantu?
I-webchat yesithathu ethandwa kakhulu, i-Bazoocam.org, isebenza kunye noluntu lwaseFransi-lwesiJamani kwaye lugubungela iindwendwe ezingama-40 000 ngosuku. Abaphulaphuli baseRussia malunga nalolu hlobo banomdla kakhulu kwiVideoschatRU.com, apho yonke imihla ifika malunga nabantu abayi-10. Le sayithi ayifuni ukubhaliswa okuhlawulwayo kwaye imodareyithwe, evumela ukuba ingavumeli ukuxhamla izinto ezingenakwaneleyo. Kwabo bafuna ukuzalisa ukungaziwa kunye nenkululeko yokuthatha isenzo, kunengqiqo ukujonga ubuso be-Facebuzz.com - i-United States efanayo ne-roulette chat, apho abadibaniselwano baya kuba ngaphantsi kwevidiyo kwi-VideochatRU.com, kodwa abayi kuba nexhala malunga nokumodareyitha. Abo banqwenela ukunxibelelana nabasebenzisi baseRussia abangabonakaliyo baya kuba luncedo ukujonga iVideomail Mail.ru - yesibini ye-roulette yengxoxo ye-roulette. Ingxoxo imodareyithwa, kodwa unxibelelwano kuyo lwenziwa ngolwimi lwendabuko.
Video Roulette 18 Ngaphezu ngaphandle kokubhalisa kukutshintshiselana kweengcamango neemvakalelo kwinkqubo yencoko yangaphandle. Apha awuyi kubuhlungu. Ukuba umntu owangaphambili wangakuchukumisi nantoni na, qhubela phambili kwaye uqhubeke uncokola unxibelelwano.
Chatrouletka ezamahala kwaye ngaphandle kokubhalisa namantombazana
I-roulette yengxoxo kunye namantombazana? Kuyavakala ukulingwa, kwantle! Kwaye kwaye kunomdla kakhulu, kuba unokuva kwaye ubone kwi-webchat izinto ezininzi ezithakazelisayo. Ngaphandle kokubukela ingaphakathi lomntu womntu ngasemva kubangela umdla wokwenene.
Ukuxoxa ngevidiyo kwi- yindawo efanelekileyo yokuseka oonxibelelwano lwangaphandle. Unokwenza, ngokuqinisekileyo, ukupakisha iingxowa zakho kunye ne-hitchhike kwiYurophu, kodwa kuya kuba nako ixesha nemali. I-roulette yengxoxo inakho ukukhawuleza kwaye ikhululeke ukuthetha kunye nabani na umntu onokuxoxa ngokufanayo ngewebhu njengoko unayo. Kulula kakhulu ukumisa i-chatroulet: yiya kuyo, nqakraza "Konke amazwe" kwaye ukhethe ilizwe. Makube namhlanje - eJamani (eJamani).ncedisana. Ndakuqonda oku njengomntwana xa ndive ibali malunga nendlela endinomkhulu omkhulu ngayo kwiMfazwe Yehlabathi I yabanjwa ngamaJamani, wayesebenza ixesha elide kwipulazi ye-righer ecebileyo, kwaye wamthanda kakhulu ngomsebenzi wakhe onzima kangangokuthi wagqiba ukutshata yakhe intombi . Ukususela ngexesha lokuthunjwa wam umkhulu-utata wayesele esatshatile kwaye wayenabantwana abaningana, umtshato awuzange kwenzeke, kodwa ibali esilisoloko silinxulumene namaJamani (iWWII - lingabalwa) lomelelwe kakhulu kwiintsapho zethu kunye nengqondo yami.
B I-roulette yengxoxo yesiJamani Ndandilandela ukuvela kwintsha. Ndandifuna ukuqonda ukuba zeziphi iziJamani zamhlanje; Ndandifuna ukuthetha nabafana kunye namantombazana. Kuyinto ekhohlakeleyo ukuthetha, kodwa ndandinomdla kulo mbandela ngokubonakala: ndandifuna ukugxotha okanye ukuphikisa inkolelo yokuba amadoda aseJamani ayelunge ngakumbi kunabo basekhaya. Isihlandlo sokuqala sasinzima, njengoko i-roulette yaseJamani yayisoloko iphosa abameli bezesondo ezinamandla - kuzo zonke iindawo kunye nezizwe (iJamani namhlanje ayikho kuphela amaJamani, kodwa amaRashiya, amaYuda, amaTurkey, amaArabhu). Emva koko iintombi zaqalisa ukuthetha, emva kokuba ndathetha ukuba ndiyifumene ukuba umkhulu-omkhulu-omkhulu wayengayi kutshata nomfazi waseJamani nangona engatshatanga. Kodwa ukuba ndandisendaweni yakhe, isiJamani asiyi kukhanyela ukunikezelwa kwesandla nentliziyo: kuba inxalenye enkulu yabameli baseJamani babenomdla kwaye. efanelekileyo. Ndiya kuthetha nokuba ziyalwe kule miyalelo yokuba abantu abacebileyo baseRashiya abahleki.
I-webchat yesiJamani, eyaziwa ngokuba yi-chat roulette eJamani, yabonakalisa into emangalisayo kumaJamani: kunye nothando lwabo lwangaphakathi kunye nolwangaphandle, bahlala bengahlali. Xa ndifake i-video yeJamani i-intanethi ngethempelini, ngamanye amaxesha ndigijimela iingubo eziphahlileyo okanye iiplate. Nangona kunjalo, kwi-monastery engaqhelekanga, ngokukodwa kwamanye amazwe, kunye nekhontrakthi yayo akufanelekile ukunyuka. Kunzima ukucinga ukuba ingxoxo yevidiyo yaseJamani yayibonakalisa inxalenye yam. Ndiyicinga ukuba ngokukhawuleza ukuba ndihlambuluke kwinqanaba lam, i-roulette 97019 ye-German roulette iya kuphinda iphindwe kwimodi yam yokukhangela i-interlocutors evela eJamani.
I-roulette yengxoxo 18 yabantu abadala
Obomi bethu ngamanye amaxesha awunakulinganiswa kwaye uzaliswe ngokuxakeka. Xa, ekufuneni lwakho lonwabo, ulahlekelwe yiyo yonke ithemba lempumelelo, ikusasa likunika elinye ithuba lokuvuyela!
Ingxoxo yevidiyo 24 iiyure
Ukubhala abantu kubonakala bephendukela kwi-intanethi - enjalo into enyanisekileyo. Uze uqhagamshelane ne-roulette iiyure ezingama-24 (unokudibana nelinye igama-ingxoxo yevidiyo 24) - lelinye lezona zixhobo eziphambili zeli nyaniso. Makhe ndikuxelele ngakumbi malunga namava am.Ukuqonda ngokufanelekileyo, sabhala ikhowudi yeVideotailer24 ukuze isebenze kuzo zonke izixhobo: idesktops, iiptops, iipilisi kunye ne-smartphones kunye nayiphi na inkqubo yokusebenza. Siyiqwalasele ingqalelo kwi-OS e-Android kunye ne-iOS ethandwa kakhulu. Funda kabanzi malunga nengxoxo yethu yevidiyo ye- kwi-Android.
Ngokomgaqo, akukho ntlukwano phakathi kwengxoxo yewebhu kwi-Android okanye, masithi, kwi-Windows. Umgaqo wokusebenza kunye nokusebenza kuyafana:
Ungasebenza ngaphandle kokubhalisa kwaye ukhululekile.
Ungabhalisa uze ufumane iakhawunti yakho. Ungakwazi ukubeka iifoto zakho, kwaye enye yazo (kufuneka uchaze ukuba yeyiphi) iya kubonakala kwiphepha eliphambili le "Videorulet24" kwaye liya kufumaneka ukuhlaziywa kubo bonke. Ngokuchofoza kuyo, umsebenzisi uya ku-akhawunti yakho, apho angashiya umyalezo wakhe - umzekelo, kunye neenkcukacha zabo zoqhagamshelwano.
Video Roulette kwi-Android ikuvumela ukuba ukhethe ilizwe abasebenzisi abangathanda ukuthetha nabo.
I-interlocutor ikhethwe ngokulandelana (i-roulette efanayo!)
Ukuphela kwenguqu yevidiyo ye- kwi-Android esuka kwi-Windows - kwisiboniso esikrinini, kuba ubukhulu bezinto ezikugqibela kwi-PC nakwi-smartphone buhluke kakhulu kokubili ubukhulu kunye nobukhulu bomlinganiselo. Ngaphezu koko, ukuba kwidesksi ububanzi bukhulu kunokuba ubude, ngoko kwifowuni iyahlukana.
Ukuba ufaka i-roulette yengxoxo nge-smartphone, unokuba nobunzima bokuhamba (oku kuxhomekeka kakhulu kumzekelo othile wegadget). Kule nkalo, icebiso: ukwenzela ukuba u- ukulinganisa i-roulette kwi-Android ingabangeli nayiphi na ingxaki, faka isicelo kwi-smartphone yakho. Khuphela ingxoxo yevidiyo kwi-Android, kunye nokuyisebenzisa, ayikhululekile. Oku kunika ntoni?
Ukuzonwabisa ngokuhamba. Zonke iifayile ziya kubonakala, ngoko ke kulula ukuchofoza kubo.
Isicelo sidinga i-RAM encinci kunye nezinye izibonelelo zegadget, kwaye i-roulette yengxoxo kwi-Android iya kuhamba ngokukhawuleza kunokuba uvula inguqulo yomshicileli. Kwiimodeli ze-fowuni ezisezantsi, oku kuyinzuzo enkulu.
A ngokubanzi, ukusetyenziswa kwe "VideoLet24" kwisigadget ephathekayo kunomgangatho oxabisekileyo: ungabonisa ukuba unxibelelwano lwakho lungekho kuphela ngaphakathi kwendawo yakho, kodwa kunye nemifanekiso evela ebomini yakho. Kubukeka ngathi ukuthungatha i-inthanethi kunye nekhamera yewebhu, kuphela, ngokungafani neyokugqibela, ividiyo iya kwenziwa ngaphandle kwendawo enye - kunye nomnxibelelwano unokubuza ukuba yiyiphi into ekubonayo. Ngokuqinisekileyo ezo ndawo zengxoxo zevidiyo kwi-Android ziyaziwa ngabo bonke abasebenzisi. Oku kwenza kube lula ukufumana abantu emhlabeni jikelele abaya kuvuma ukuqhubeka beqhelana ngakumbi. Kwaye njengoko isaga esilumkileyo sithi: "Unayo i-ruble 100, kodwa unamahlobo angama-100."Ngoko zama video yokuxoxa nge-Android kwaye ujabulele ngokulula!
Indlela yokufikelela kwingxoxo yevidiyo esuka kwifowuni ye-
Siyabonga ukukwazi ukunxibelelana ngaphandle kokubhalisa, uvavanyo lwengxoxo luye lwaziwa kakhulu. Ewe, abantu abaninzi bafuna ukunxibelelana kwi-chatrulette kungekhona nje ukuhlala ekhaya emva kwePC okanye i-laptop, kodwa kunye nezixhobo zeselula - ifowuni okanye ithebhulethi.
I-Mobile version ye-video chat roulette
Ndifuna, njengomtsalane omdala wengxoxo yewebhu, ukuthetha ngento entsha ebonakalayo kwintetho yevidiyo. Oku kukwazi ukuthetha kunye ne-smartphone yakho! Kwaye akunandaba nokuba yintoni inkqubo yakho yokusebenza - i-Android okanye iOS. Abanikazi bee-smartphones abanemvelaphi ye-Windows abayi kukhubekiswa, umzekelo kumachungechunge uLyumiya.
Video yokuxoxa Ingxoxo
Ukuba uvela e-Kazakhstan kwaye awukwazi ukufumana ingxoxo efanelekileyo yokunxibelelana kunye nabaqhelana nabo, siyavuya ukuzisa ingxoxo yevidiyo GYR-GYR.
I-chatroom yethu iyadibanisa abantu abaninzi abanomdla kunye nabanobubele abavela kwizixeko ezahlukahlukeneyo zaseKazakhstan.
Tyalela abahlobo abatsha - kuhlala kunomdla! Ingxoxo yevidiyo I-GYR-GYR ikunika ithuba lokuthetha kunye nokuhambelana nomnxibelelwano wakho, kodwa ukucinga nomntu othetha naye, inzuzo enkulu. Ukongezelela, nge-roulette yengxoxo awusoze wakhathazeka kakubi xa udibana, njengoko unxibelelwano lwenzeka phantse luphila. Oku kuhluke kakhulu kwintetho eqhelekileyo yengxoxo yokuxoxa. Kwiindawo eziqhelekileyo zokungcola, abaninzi abantu abavumi ukuba ngubani. Ngengxoxo yevidiyo ye-Gyr-Gyr, ayiyi kubakho into emangalisayo!
Iyona nzuzo enkulu yengxoxo ilula kwaye ilula xa kunxibelelana. Ukuze uqale incoko, kufuneka ucinezele iqhosha elithi "Qala" kunye nefestile kuza kuvela kwisikrini ngesithombe somnxibelelwano wakho. Igumbi leengxoxo lisebenza ngomgaqo wokuthandana okungaqhelekanga, ngoko awukwazi ukuba ngubani oza kuba kwisikrini. Ukuba ngenxa yesizathu esithile unganelisekanga ngolwazi olutsha, unako ukuqhubeka uphendlo lomnxibelelwano wakho usebenzisa iqhosha "elilandelayo". Kwakhona, ingxoxo ye-GYR-GYR ayichazwanga kwaye ayifuni ukubhaliswa kunye nedatha yomuntu siqu.
I-roulette ye-chat yethu ayinakukunika isizathu sokukhathazeka, kuba kukho abantu abaninzi abadala kunye nabantu abanomdla kwintetho abahlala bevuya ukudibana nokuthetha ngeminqweno yabo. Yingakho e-Kazakhstan ingxoxo yevidiyo ye-GYR-GYR ithandwa kakhulu kwaye yonke imihla abaphulaphuli bethu baya kuba ngakumbi. Abemi abaninzi baseKazakhstan sele beqaphele ukuba i-video ye-GYR-GYR incokola kakhulu, kulula, ngokukhawuleza kwaye kunzima. I-roulette yengxoxo yithuba elihle kakhulu, ngokukodwa kwicandelo labantu abangasetyenziswanga ukuhlangana kwizitrato. Apha uya kuba nethuba lokubonakalisa ingqondo yakho okanye uxhaphalo, ukwazi ukuba kuya kuba ngabantu abaya kukuxhasa.
I-Roulette ye-Chat GYR-GYR - le ngxoxo yevidiyo ngokuyinhloko kulabo bazimisele ukuthatha ingozi kwaye banike ukhetho kweso sihlandlo. Emva koko, akunakwenzeka ukungavumelani ukuba ebomini bethu izinto ezininzi zinqunywe ngethuba. Yaye ukuba unxunguphekile okanye wenziwe nje usuku olubi, ukuba ungeyimizwa, ukuba unqwenela ukuthandana okanye ufuna nje ukudlala ngothando, ukuba unganamhlobo okanye ungaziva unesizungu - uye kwikamelo lethu lokuxoxa! Kwi-chat yethu niya kufumana iimpawu ezintsha ezingalibalekiyo kwaye nimangaliswe ukuba ubomi bakho buya kukhanya ngakumbi kwaye bumnandi!
City - ibaluleke kakhulu kumntu wanamhlanje. Ubomi bethu bunzima kwaye ngamanye amaxesha, ngaphandle koqhagamshelwano oluqinileyo, akukho mnye amathuba okuthetha nabanye abantu, baxoxe nayiphi na imiba, okanye baxoxe ngemfihlo. Amathuba okuxoxa nge-roulette akuvumela ukuba ufumane umntu kunoma iyiphi nayiphi indawo yehlabathi kwaye ugcwalise izikhalazo zokunxibelelana kalula kwaye ngokufanelekileyo. Thetha kwingxoxo yevidiyo xa kulungile kwaye kuyimfuneko kuwe!
Igama elitsha "uxoxe": yintoni inqaku?
Ufuna ukwazi oko kukukhanga abantu abaninzi kweli gama elitsha? Enyanisweni, into yonke ilula kwaye icacile:
luvuyo lokuthetha nabantu abanomdla:
online webchat, ukuvumela ukuba udale ukungaxakali kolwazi lomntu kwi-benki yepaki okanye kwitafile ye-cafe;
Indlela yokuchitha ixesha lakho lokuphumla lunomdla kwaye lunomdla;
yokufumana indawo yokufumana umxhasi wezinto ezinomdla - umtsalane we-cinema okanye iincwadi, ezinye izifundo.
Video Roulette idibanisa amawaka wabasebenzisi, kwaye eli lixabiso layo eliphambili. Ukongeza, le ngxoxo isesiteji xa uphuhliso luvela rhoqo imihla, kwaye konke oku kunye kwenza ukuba unxibelelwano luyinyani kwaye lubalabala, kodwa luyinyani, luvuyo, luninzi. Ngentetho ye-intanethi ye-intanethi, uya kuba nenjongo yokuqhayisa iindlovu ezidabukileyo zentlanzi, xa imvula ingqongqo kwi-asphalt ngaphandle kwewindow, kwaye imvakalelo ihamba ngokukhawuleza kwi-zero.
Ukuhamba, ukuthetha, ukuthetha ...
Ukuthandwa kweRoulette - ingxoxo yevidiyo kunye negama sele isaziwa ngokwaneleyo ngokwaneleyo-iba ngumqondiso wale ndlela yokunxibelelana. Ngeendlela ezininzi, indima edlalwa yikhompyutha yoluntu, i-intanethi ekhoyo, kunye nokutshintshwa kugxininiswa. I-chatroulette yamahhala yinto yolonwabo kubaqalayo, kodwa kunjalo banqwenela ukuxoxa kuze kube sekuseni 9.7004
Setyenziselwa ukusebenzisa ingxoxo - kunye kunye kunye. Ngoko, ukuqala ingxoxo, akudingeki ukuba uhambe kwinkqubo ende yokubhalisa, kwaye le nto imangalisayo. I-roulette yengxoxo ifumaneka ngokukhawuleza ngaphandle kwesikolo, kwaye unokudibanisa nomnye umntu malunga nangoko. Inani labasebenzisi likhula imihla ngemihla, okwandisa ithuba lokudibana nomntu onomdla kwaye bazinikezele ngeengxoxo eziqinileyo ixesha elide.Umfanekiselo wethu weChatroulette yimoto yakho kwindawo yokude ehamba phambili, kwaye umnxibelelwano wakho ngulowo uhambahamba naye. Imigangatho emitsha yoqhagamshelwano iya kwiRashiya, kwaye i-webchat yethu yenye yezona ziqhakazileyo.
Ubungakanani bentetho yamahhala yinto yokuba nakanjani nabani na ongayisebenzisa yonke imisebenzi yayo. Akuyimfuneko ukuba ube ngumsebenzisi ophambili kwi-intanethi ukuze ufunde imigaqo ye-Roulette ingxoxo. Utshintsho oluvela kumsebenzi omnye ukuya kwenye lwenzeka ngokukhawuleza kwaye aluququzeli nayiphi na imiqobo, nto leyo ithetha ukuba abaninzi banxaxheba kulolu hlobo loqhagamshelwano.
Uluntu olwahlukileyo ngokwemigangatho yokuba ngumntu omnye okanye elinye lalo maxesha ngamanye ubeka isakhelo esinamandla. Ewe, ukuxoxa ngevidiyo kunika ithuba lokuphula zonke iindibano zentlalo ezikhoyo kwaye ube yinto oyifunayo. Iintloni kunye nesigqibo esicacileyo, esicacileyo kunye esiphelile, esilumkileyo kwaye asiyiyo kakhulu - sonke singabantu abalambileyo ukunxibelelana baze bafumane ukutya kwabo. Kukho abantu abaninzi baseRussia namhlanje abazimisele ukuthetha ngendlela enomdla kwaye banokufumana kuyo amanzuzo amaninzi.
Ukusebenzisa ingxoxo yevidiyo yaseRussia mahhala iyakwenzeka ngoku kwangoku, akukho mfuneko yokunganqikazi!
I-Russian dating dating chat is isizathu sokutshintsha ubomi bakho kwaye uqale uqhagamshelwano nosuku oluvela kubantu abavela kumazwe ahlukeneyo. Ingxoxo yeVidiyo yokuthandana iya kuba yinto yokufumana ngokwenene, kunye nokupasa okungenakwenzeka kwihlabathi elitsha, kunye nokuthandana ngokuxoxa ngevidiyo kuya kuba ngumvuzo wenkalipho.
Umlingo we-Russian roulette roulette ufumaneke kuwo wonke umntu!
Umntu uhlala kwihlabathi lokuthetha rhoqo. Kodwa kaninzi kangakanani ixesha elaneleyo okanye kungekhona umntu ofanelekileyo okuthetha ngexhala. Ngoku yonke into enjalo ixazululwe ngokukhawuleza! Kwanele ukusebenzisa i-Russian roulette inkonzo yencoko nge-intanethi ukufumana oqhagamshelwano oluhle kwaye uthetha nje
Onxibelelwano lwevidiyo ye-
Ukunyaniseka kwinto yesithathu yeminyaka-i-video yokuxoxa kwi-intanethi. Ingxoxo nganoma naliphi ixesha lomhla iya kubangela uvuyo kubo bonke abangayifumana ifom yoqhagamshelwano. Ingxoxo yevidiyo ye-intanethi yamadoda kunye nabasetyhini bamaxesha ahlukeneyo kunye nemimiselo yoluntu-entsha kwiWebhu Yehlabathi Yehlabathi 9,7004
Video Roulette: Zama iFate
Video Roulette yinkonzo enomdla kwaye inomsebenzi ekuvumela ukuba ukwazi umntu onomdla ngaphandle kokushiya ikhaya lakho kwaye uchithe ixesha lakho lokuzonwabisa kunye nomgangatho ophezulu. I-Roulette ingxoxo ngaphandle kokubhalisa ikuvumela ukuba uqale ukuxoxa ngokukhawuleza. Wena ngokwakho unquma ubude bobudlelwane obutsha kwaye ungathwali nayiphi na imbopheleleko kumlingane kwincoko eyona nto. Umgaqo-siseko we-video routing yi-automated search for interlocutor ofanelekileyo.Kulapho, kwisitalato esicatshulwayo, sinokuhlangana nomntu onentshisekelo yakhe ehambelana neyethu. Kwaye abo bathanda ukuxoxa, kukho iingxoxo. Inceba kuphela kukuba akusoloko sikwazi ukubona ukuba ngubani odibanisa nathi. Emva kwakho konke, kwi-intanethi, wonke umntu uzama ukudala umfanekiso olungele yena ngokwakhe. Kodwa musa ukuphelelwa lithemba! Ingxoxo yevidiyo iza kunceda ukuthetha kwi-intanethi ngomntu ophilileyo, kwaye kungekhona ngomfanekiso nge-nickname "avatar".
Iimpawu ezininzi ze-intanethi ye-interlocutor
Ukuxoxa nge-intanethi kwaye ngokukhethekileyo ukuxoxa ngokuqhelekileyo kunceda abantu abadumileyo ukuba bazibonakalise, bakhuphe iingxaki zokunxibelelana kwaye benze abahlobo abatsha kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, mhlawumbi bathande ubomi. Kodwa kwenzeka kwakhona ukuba singabanjwa "nomntu onetyhefu", emva kokuba "uthetha" naye ongekho into esebenzisa incoko yevidiyo - andifuni ukuhlala kwi-intanethi! Ngako-ke, njani ukwahlula phakathi kwe "trolls" kwintsebenziswano efanelekileyo eyaneleyo? Ziziphi iimpawu kufuneka umchasi wakho abe nencoko yevidiyo kunye nendlela yokuziqonda ngokuchanekileyo ekunxibelelaneni kwi-Intanethi, eli nqaku liza kuthi
Iimpawu ezixutywayo kunye neenzuzo zokuxoxa ngevidiyo.
Iyiphi ingxoxo yevidiyo? Abo baqhelayo ngaphakathi ngaphakathi kunye neziganeko zomsebenzi wesi sicelo bangakhetha iimpendulo kulo mbuzo ngeendlela ezahlukeneyo. Abaninzi bakholelwa ukuba le yindlela nje yokuchitha ixesha lakho lokuzonwabisa, oku kukuzonwabisa, akukho nto. Nangona kunjalo, kukho nabo banokubona impumelelo engakumbi kunye namathuba kwiingxoxo zevidiyo. Fumana esinye isiqingatha, wandise i-horizons yakho, ngokuzenzekelayo uzifumane kwindawo ehluke ngokupheleleyo yeplanethi. Kwaye akunjalo. Indlela yokufunda ukufumanisa inzuzo enkulu ekusebenziseni i-video yengxoxo?
Innovation, njengendlela entsha yokunxibelelana
Ufuna ukuthetha kwaye ungafuni ukuchitha ixesha kwiibhalana ezide, ngoko ingxoxo yewebhu yindlela ekhethekileyo kuwe. Ngosizo lwenkonzo, ihlabathi lonke livulela wena, awunayo imida, unokuthetha kangako njengoko uthanda, uhlala unomdla ekuxoxaneni nabantu abahlukeneyo. Akukho mfuneko yokucinga malunga nendlela yokubhala, ukuba ubhale ntoni, nokuba unomdla kwi-interlocutor yakho - qhagamshelana ngekhamera yewebhu kwaye ujabulele incoko.
I-Chatterelle yindlela enhle yokudibana nendoda eneminyaka engama-
Kuphi ingxoxo engaziwayo yokuthandana nokukhangeleka kubasebenzisi? Mhlawumbi into yokuba wonke umntu oba nguthathi-nxaxheba unokukwazi ukuphumla ngokuzeleyo aze aphenduke ngokwakhe. Ngexesha elifanayo, akunandaba nantoni na imeko yakhe ebomini bokwenene, nokuba uyintsapho okanye umntu ongeyena osapho - kwingxoxo yevidiyo, wonke umntu ulinganayo, uvule kakhulu, kwaye ukhululekile ngokupheleleyo kunoma ubani.
Umveleli we-site yethu ufumana kwi-interlocutor ekhethiweyo kwaye uqala ukuthetha naye, ukuba akayithandi umnxibelelwano, unokutshintshwa ngokulula ukuya kwenye (ukwenza oku, nqakraza iqhosha elilandelayo)
Izixhobo ezininzi zeengxoxo zethu:
I-roulette ye-chat yethu ihlukile kwaye ihluke ngokuthe ngqo kwezinye iindawo zokuxoxa. Ngezantsi unokufumana izibonelelo ezi-5:
Ukubhaliswa kokugqibela - ukuze uqale ukusebenza kunye nenkonzo awudingi ukuchitha ixesha elide. Ukubhaliswa kwenziwa kwimizuzu emi-5, 9808 kuphela
I-access-clock-access-clock - ungangena kwingxoxo nganoma naluphi ixesha lomhla uze ufumane umntu: indoda okanye ibhinqa.
Izibonelelo eziphezulu zabaphulaphuli - inani elikhulu labasebenzisi abavela kwihlabathi lonke liza kwisayithi yonke imihla. Unokuzifumana unxibelelwano oluvela eU.SA, eDenmark, eBrithani enkulu, eRashiya, eSpeyin, e-Italy kunye nangaphezulu kwi-9 7008
Ufuna uphando lwabahlobo - akudingeki uhlale kwisiza yonke imini ukuhlangabezana nabantu abanomdla. Bhalisa umyalezo wevidiyo kubasebenzisi kwaye usitshele ngawe. Abantu baya kujonga irekhodi baze baqhagamshelane nawe. Unokuphanda kwakhona abahlobo ngendlela efanayo.
Ukukhethwa kwezesini - kuphela kuthi unokukhetha ukhetho lwesini kunye nomntu ongazifuni ukuthetha.